ကြည်ကြည်ရဲ့ဒိုင်ယာရီ: August 2011
မြန်မာပြည်ရောက်ဖူးတဲ့ ဂျပန်တွေရော ဂျပန်မှာနေကြတဲ့ မြန်မာတွေရော ပြောတဲ့စကားရှိတယ်။ ဂျပန်မှာကြီးတဲ့ဟာတွေက မြန်မာပြည်မှာသေးတယ်တဲ့ မြန်မာပြည်မှာ ကြီးတာတွေက ဂျပန်မှာသေးတယ်တဲ့။
မြန်မာပြည်က မုန်လာဥတွေက သေးတယ်စပ်တယ်။ ဒီက မုန်လာဥတွေက မျိုးတွေပဲပြောင်းထားလို့ပဲလား ချိုပြီး နည်းတာကြီးတွေမဟုတ်ဘူး။ ဟော သခွားသီးလည်း ကြရော သေးသေးလေးတွေ ရှင်။ အရသာကတော့ အပြည့်ပေါ့ အဆူးလေးတွေတောင် ကျန်သေးတယ်။ မြန်မာပြည်က သခွားသီးကြတော့ကြီးကြီးတွေကိုး။
ဂျပန်က ငရုတ်သီးကို စပြီးစားပြီးလာတာ နှစ် ၂၀ တော့မပြည့်သေးဘူး။
ခုနောက်ပိုင်း ဂျပန်တွေ ငရုတ်သီးစားနိုင်ကြပေမယ့် လူကြီးတွေက မစားနိုင်ကြဘူး။ ငရုတ်သီး ၂ ကျပ်သား၁ဗူးလောက်ကို နှစ်ပေါက်အောင် ထားစားကြတာလေ။
၉၆ တုန်းကလောက်ဆို ငရုတ်သီးစပ်စပ်ဆိုတာ တီဗီအစီစဉ်တွေရဲ့
Quiz အစီအစဉ်တွေမှာရှုံးသူစားကြေး ဆိုတဲ့ အစားအစာ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခေတ်ပြောင်းလာလိုက်တာ ခုများတစ်ခါတစ်ခါ သူတို့ခေါက်ဆွဲဆိုင်တွေမှာ ကိုယ်တောင်လက်ဖျားခါရအောင်စပ်တဲ့ မီနူး ရှိသရှင့်။
တိုကျိုလိုမြို့မှာတော့ ငရုတ်သီးစိမ်းဆိုတာမြင်နိုင်ပေမယ့် နယ်ဘက်မှာတော့ ငရုတ်သီးစိမ်း အစပ်ဆိုတာ ရာသီပေါ်ပဲ။
ဒီကြားထဲ တစ်ချို့ငရူုတ်သီးတောင့်ရှည်ကြီးတွေဆိုတာ စပ်မလိုလိုနဲ့ ချိုလိုက်တာ အရသာတော့ရှိတာပေါ့လေ။ ရောက်ခါစ မြန်မာတွေတော့ခဏခဏ မှားတာပေါ့လေ။ မြန်မာပြည်က တောရွာတွေမှာ ငါးလေး ဖားလေးရရင် မျှစားတယ်ဆိုတာကြားဖူးတယ်။ တို့တွေလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ငရုတ်သီးစိမ်းအစပ်လေးဘာလေးရလို့ မျှစား အတော် မျက်နှာပွင့်တယ်။း)
ငယ်ငယ်က အိမ်ဘေးမှာ ရခိုင်မိသားစုရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ရခိုင်သင်္ဘောသီးသုပ်ဆိုပြီး ငယ်ငယ်က သုပ်စားတာ အိမ်က အငယ်မ က ၆ တန်း ကိုယ်က ၁၀တန်း ရင်တွေပူုပြီး ငိုယိုလို့ ဘာမှမလုပ်တတ်ပဲ သူ့ကိုယ်ပေါ်ကနေ ရေတွေလောင်းချ ကိုယ်ပါ ရောငိုတာ ပြန်တွေးတိုင်းရီချင်တယ်။
တနေ့ကတော့ organic တွေ ရောင်းတဲ့ဘက် ခြေရှည်တော့ ငရုတ်သီး ရလာတယ်။ ငရုတ်သီးလှလှလေးတွေ ပါရလာတယ်။ အရှည်ကိုတော့စပ်တယ်တဲ့။ အပုလှလှလေးကိုတော့ သူလည်းမစားဘူးဖူးတဲ့။ ခုတစ်လောတင်တာတဲ့။ paprika အသေးစားနော်တဲ့။ အိမ်ရောက်တော့ ခေါက်ဆွဲကြော်ထဲ ကတ်ကျေးနဲ့ကိုက်ပြီးထည့်လိုက်တယ်။ ခေါ်ကြွေးတဲ့သူငယ်ချင်းလည်း ငို . ကိုယ်လည်းငိုး) ရင်တွေပူလွန်းလို့ ထမင်းပူမျိုချလို့လည်းမရ။ အာ် ဂျပန်ငရုတ် အထင်သေးမိလိုက်တာကိုး။
တူတူဝယ်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေကို ငရုတ်သီး စပ်ကြောင်းဖုန်းနဲ့လိုက်ပြီးပြောရတာကိုက ပျော်စရာ ငရုတ်သီးရှားတာကိုး လို့ ။အညာက ငရုတ်သီးအပုမျိုးလားလို့ ကိုယ်လည်းအခြောက်ပဲမြင်ဘူးတာ။ ဆင်အော်ငရုတ်လို့ထင်တယ်။ မိုးယံပြောတာတော့ ကုလားအော်တဲ့။
ရေးချင်တာက တခြားအကြောင်းပါ။ ဂျပန်မှာတွေ့မြင်ရတဲ့ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေက တစ်ခါတစ်ခါ ရီစရာကောင်းသလို စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။
ကျွန်မတို့နယ်ဘက်မှာ တိုကျိုကလို ဘဏ်ကြီးတွေက နေရာတိုင်းမှာမရှိဘူးလေ။ ဘဏ်တွေကိုလည်း Bank လို့မရေးဘူး သူတို့စာနဲ့ပဲ ginko လို့ရေးတယ်။ ကျောင်းသားတွေက အမြဲကွန်ပလိန်းလုပ်တယ်။ ဘဏ်ကိုတော့ဘဏ်လို့မရေးဘူးတဲ့ ဟော ဂျပန်က ဖုန်း ကုမ္ပဏီင်္ကြတော့ Soft Bank တဲ့။ ကျွန်မတို့ နေတဲ့နေရာက ကျိုတိုနဲ့နီးတယ် ။ ကျိုတိုဆိုတာ ကတော့ ပုဂံလိုပါပဲလေ။ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားက များတာကိုး။ တနေ့ကတော့ ဘူတာနားမှာကပ်ထားတဲ့စာတမ်းလေးတစ်ခု တွေ့တယ်။ အဲ့ဒီ့ကပ်ထားတာလေးအပြင် ဆိုင်အ၀င်ဝမှာလည်း ထပ်ပြီးအကြီးကြီးကပ်ထားတယ်။
We are selling Phone. တဲ့ Soft bank ဆိုတော့နိုင်ငံခြားသားတွေ ခဏခဏ ၀င်ပြီး ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့ကြိုးစားကြလိုို့တူပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဂျပန်က လေ ဆိုင်းဘုတ်လေးတွေကို ချစ်စရာကောင်းအောင်လည်းရေးတတ်ကြသလို သွယ်ဝိုက်စွာလည်း ရေးတတ်ကြတယ်။
မြန်မာလို ငှက်စာမကျွှေးရလို့ ရေးမယ် နေရာမှာ ဒီမှာတော့ ငှက်ပုံလေးဆွဲပြီး ငှက်ကလေးကပြောနေပုံနဲ့
တို့တွေကို အစာမကျွေးနဲ့နော် ကျေးဇူးပါတဲ့။
ကျွန်မတို့ မြိုက ရေကန်ကြီးရဲ့ဘေးမှာ ငါးကြင်းနီလိုငါးမျိုးတွေရှိတယ်။ ရေကန်ထဲက ငါးတွေကို ဂျပန်တွေက မျှားမျှားပြီး အမှိုက်ပုံးထဲပဲ ထည့်သွားကြတော့။ ငါးပုံလေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့က စားလို့ကောင်းပါတယ်။ အိမ်ပြန်သယ်သွားပါလို့ ရေးထားတာလေးလည်းဖတ်ဖူးတယ်။
မြန်မာပြည် က ရေအိမ်တွေမှာ အား သန့်ရှင်းစွာ သုံးပါ ဆိုတာလေးတွေကို ဂျပန်မှာတော့ ဒီလိုရေးကြတယ်။
အမြဲတမ်း လှပသန့်ရှင်းစွာ သုံးပေးတဲ့ သင့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်ဝင်မယ့်လူက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ဘေးနားမှာရေးထားသေးတယ်။ ဂျပန်မှာ ကာရာအိုကေ ဆိုင်က မြန်မာပြည်ထက်သက်သာတယ်။ ည၁၁ လောက်ကနေ မနက်၆ နာရီလောက်ထိကို တစ်ယောက်မှ ယန်းတစ်ထောင် ခုမြန်မာငွေနဲ့ဆို ၇၀၀၀ပေါ့ ။ အောက်ကပုံက အမျိုးသမီး ရေအိမ်တွေမှာ ထားပေးတတ်တဲ့ ဆားဗစ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျေနပ်စရာ။
ဂျပန်ယာကူဆာကို ရကောက် လို့ ကျွန်မတို့မြန်မာတွေက အလွယ်တစ်ကူ ခေါ်ကြတယ်။ ဂျပန်တွေကတော့ ရာကူဆာလို့ မသုံးနှုန်းပဲ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်း လို့ သတင်းတွေမှာသုံးသလို public area မှာတော့ တတ်တူးထိုးထားသူလို့ ခေါ်လေ့ရှိတယ်။
ရေချိုးဆိုင်တွေ ရေပူစမ်းတွေ မှာ အမျိုးသမီးတွေ အခန်းမှာရော အမျိုးသားတွေ အခန်းမှာရော ကပ်ထားတတ်တာလေးရှိတယ်။
တတ်တူးထိုးထားသူများ ရေပူစမ်းဝင်ခြင်း အားနာပါ (သည်းခံပါ) တဲ့။
ရကောက်မှန်းသိရင် ကျန်တဲ့ဧည့်သည်တွေက မ၀င်ရဲကြတော့ဘူးလေ။ ခုချိန်ထိလည်း သူတို့ရဲ့ပါဝင်မှု့က ရှိနေသေးသကိုး။ ဂျပန်ပြည်က ပါချင်ကိုး လို့ခေါ်တဲ့ ဂိမ်းတွေ အရက်ဘားတွေ အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ငန်း ကြီးတွေမှာ သူတို့ပါသတဲ့။
Posted by ကြည်ကြည် at 9:53 PM 11 comments:
Posted by ကြည်ကြည် at 2:34 AM 14 comments:
ရတနာမှာ ပုလဲနဲ့စိန်နဲ့တွဲထားတာကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။
ခုတစ်လော ခရီးတွေ တအားများပါတယ်။ တစ်ရက်လောက်နားလိုက် ခရီးထွက်လိုက် နဲ့လိပ်ပတ်ကို မလည်ပါဘူး။ ပြန်ခါလည်းနီးပြီလေ။
မဖြစ်မနေသွားချင်ခဲ့တဲ့နေရာက ပုလဲကျွန်းပါပဲ။ ကဲ ဒီတစ်ခါတော့ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကြည်ကြည်တို့နေတဲ့နေရာကနေ ကီလို ၁၆၀ လောက် သွားရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီးသွားကြတဲ့ခရီးပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဂျပန်ပုလဲဟာနာမည်ကြီးတာတော့ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စိန်ဆိုရင် De Beers ၊ ပုလဲမှာ Mikimoto လို့ကိုပြောရလောက်အောင် နာမည်ကြီးတာကိုး။
ဂျပန်ရဲ့ နာမည်ကြီး ပုလဲ ကုမ္ပဏီ ၂ ခုကတော့ Tasaki နဲ့ Mikimoto (မိကိမိုတို) ပါပဲ ။ ဒီထဲက တစ်ခုက(နာမည်မမှတ်မိ) မြန်မာ့ပုလဲမွေးမြူရေးနဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ဖူးပါတယ်။ ခုတော့မသိတော့ပါဘူး။
မိကိမိုတို ပုလဲကျွန်းရဲ့ ဗဟုသုတလေးနည်းနည်းမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
ဂျပန်လုမျိုးတွေဟာ ပုလဲကို ဟိုးရှေးယခင်တုန်းက ရတနာအဖြစ်အသုံးမပြုခဲ့ကြပါဘူးတဲ့။ ဆေးဖော်ဖို့သာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။
ပုလဲငုပ်သူတွေကို AMA ပင်လယ်ရဲ့ မိန်းကလေးလို့ ခေါ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာလည်း ပုလဲငုပ်သူအများစုဟာ အမျိုးသမီးများသာဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၉၃ မှာ Mr. Koichi Mikimoto ဟာ မွေးပုလဲ (ယခုကျွန်မတို့ဝတ်နေကြတဲ့ ပုလဲလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်း လေးတွေဟာ မွေးပုလဲတွေပါပဲ။ သဘာဝပုလဲဟာ မလုံးဝိုင်းသလို အရွယ်ပုမာဏလည်းမကြီးမားပါဘုး။ ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်က ကျောက်မျက်ပြတိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးပုလဲ ဆိုတာပဲ ကြည့်လေ လုံးဝန်းမနေပဲ နဲ့ အဖုအထစ်တွေ နဲ့ပါ။ အာရှအလယ်ပိုင်းကသူငယ်ချင်းက မွေးပုလဲဆိုတာ ပုလဲအတုဆိုလို့ culturing pearls နဲ့ artifical pearls မတူဘူးဆိုတာမနည်းကို ရှင်းပြရပါတယ်။) ကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Mr Mikimotoဟာ အဲ့ဒီ့ခေတ်က ပုလဲလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးနဲ့ သူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကာတော့ ဂျပန်ပုလဲဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော် တိုကျို ရဲ့ Ginzar ဂင်ဇာ လမ်းမကြီးပေါ်မှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ပုလဲတိုက်ကြီး အဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီး ကြိုးစားခဲ့တဲ့သူပါ။ အသက်၄၀ မပြည့်ခင်မှာပဲ သူဟာအောင်မြင်သူလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
သူ့ရဲ့မွေးပုလဲ လုပ်ငန်း ကိုစတည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာ ပုလဲငုပ်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အခန်းက အရေးပါလာပါတော့တယ်။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရတဲ့အလုပ်ကို ပုလဲငုပ်ခဲ့သူအမျိုးသမီးတွေ ရရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်။
ခုသွားခဲ့တဲ့ ပုလဲကျွန်းကတော့ ISE( ဂျပန်မှာနာမည်ကြီး ကျောက်ပုစွန်ထွက်တဲ့နေရာ) ခရိုင်မှာရှိတဲ့ Mikimoto ကုမဏီပိုင် ကျွန်းဖြစ်ပြီးတော့ ကျွန်းပေါ်မှာ ပုလဲအရောင်းဆိုင် . Mikimoto အမှတ်တရပြတိုက်နဲ့ ပုလဲဖြင့်လုပ်ထားတဲ့ ရှားပါးလက်ရာ လက်ဝတ်ရတနာများကို ပြသထားတဲ့ ပုလဲပြတိုက်တို့ဆောက်လုပ်ထားပါတယ်။
ကျွန်းပေါ်ဝင်ကြေးကတော့ ယန်း ၁၅၀၀ ပါ။ ကျွန်းလေးက ကန်တော်မင်ပန်းခြံလောက်ပဲ ရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ ၄ ကြိမ်နီးပါး ပုလဲငုပ်ပြတဲ့ show လေးကလည်း လာရောက်လည်ပတ်သူ ဧည့်သည်များကို ဆွဲဆောင်ထားပါတယ်။ သာမန်ကြည့်တဲ့နေရာနဲ့ အထူးခန်းဆိုပြီး ကြည့်တဲ့နေရာ ၂ နေရာခွဲထားပါတယ်။ အထူးခန်းက ဂျပန်လူမျိုးများကို ယန်း ၅၀၀ ထပ်ကောက်ပြီး နိုင်ငံခြားသားများကို အင်္ဂလိပ်လို သီးသန့်အသံသွင်းထားတဲ့ စကားပြောတိပ်ခွေကိုလွှင့်ပေးပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားကို ပိုက်ဆံလည်း မကောက်ပါဘူး။ (ကျေနပ်မိသား)
ပုလဲငုပ်သူဟာ ဘာကြောင့်အမျိုးသမီးများတာလည်းတဲ့ ?
အမျိုးသား ပုလဲငုပ်သူတွေလည်းရှိပေမယ့် ဒီနယ်မြေအမျိုးသမီး ပိုများပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အရည်ပြားအောက်မှာ အဆီလွာ တစ်ရှူး အပို ပါရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေက အအေးဒဏ်ကို ပိုခံနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် အသက်ပိုအောင့်ထားနိုင်ပါတယ်လို့လည်း ရှင်းပြထားပါတယ်။ ဟိုးယခင်ကတည်းက ဂျပန်မှာအမျိုးသားတွေက ငါးမျှား နေတုန်း အမျိုးသမီးတွေက ပင်လောက်အောက်က စားလို့ရတဲ့ ရေမှော်တွေ နောက် ခရုတွေ ကို ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်လိုက်ရှာရင်းနဲ့ ရေအောက်ငုပ်သူတွေမှာ အမျိုးသမီး ပိုများလာပါတယ်လို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။
အမျိုးသမီး ဒိုင်ဗာ(diver)တွေ လည်ပင်းမှာကမာခွံလေးတွေ ဆွဲထားကြပါတယ်။ ကမာခွံထက် ကမာခွံကိုခြစ်ပြီးပုံဖော်ထားတာလေး တွေ သတိထားမိလို့မေးကြည့်တော့ အန္တရယ်ကင်းအဆောင်ပါတဲ့။
ဟိုးရှေးရှေုးတုန်းက မင်းသမီးတစ်ပါးဟာ ဒီ ISE အိဆေး နယ်မြေကိုရောက်လာပါတယ်တဲ့။ နေနတ်မင်းကြီး ဆက်လက်နေထိုင်ဖို့အတွက် နေရာလာရှာတာပါတဲ့။ အဲ့ဒီ့မှာ အမျိုသမီး ရေငုပ်သူ Ama တွေက ဒီနယ်မြေမှာနေထိုင်နေကြပြီး မင်းသမီးကို ကမာဆက်သပါတယ်တဲ့။ ကမာအသားကိုစားပြီးလိုက်တဲ့ မင်းသမီးဟာ အရသာကောင်းလွန်းတဲ့ ကမာသားနဲ့ နှစ်စဉ် နေနတ်မင်းကြီးကို ပူဇော်ဖို့ သူက အမ်ိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါကြောင့် ယခုချိန်ထိ နှစ်စဉ် ရေငုပ်သူတွေဟာ ကမာတို့ ခရုတို့နဲ့ နှစ်စဉ်နတ်တင်ကြပါတယ်တဲ့။
ရေငုပ်သူတွေဟာ ဘာ လက်နက်ကရိယာမှမပါပဲ ရေအောက်ကို ငုပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ လက်နဲ့ပဲ ကောက်ယူခဲ့ပြီး တစ်ခုစီဆည်ပြီး ပြန်တက်လာကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရေသံယာဇာတတွေ ကို မပျက်စီးစေရအောင် သဘာဝမဟုတ်တဲ့နည်းတွေနဲ့ မဖမ်းပါဘူးတဲ့။ ပုလဲငုပ်သူတွေဟာ အဖြူရောင်
၀တ်စုံအင်္ကျင်္ီအဖြူ လုံခြည်အဖြူ တွေနဲ့ငုပ်တာပါ။ ထမီတွေ လန်မသွားတာတော့အတော်ကို အံ့ရော်ပါပဲ။
Mr Mikimoto က မှာခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်တဲ့။ အကုန်မစားပါနဲ့။ ဗိုက်မတင်းခင် စားနေတာကိုရပ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ စကားကို လက်ကမ်း စာစောင်မှာရေးထားတာဖတ်ရပါတယ်။ သဘောကတော့ ရသမျှ အကုန် ထုတ်မသုံးပါနဲ့ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။
သူတို့တွေ ဆောင်းမှာရော ငုပ်ကြပါတယ်။ ရေထဲမှာအနေကြာသူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရေပေါ်ပြန်တတ်လာတာနဲ့ မီးလှုံတဲ့ အလေ့အထကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေပါတဲ့။ သူတို့ပုလဲကျွန်းမှာ နဂါးရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်တဲ့ မိကိမိုတိုပုလဲကျွန်းမှာ သဘာဝရေတွင်းရှိပြီး အနီးနားက ကျွန်းမှာလည်း သဘာဝရေတွင်း၂တွင်းရှိပါတယ်တဲ့ အဲ့ဒီ့တွင်း ၃တွင်းဟာ ဆက်နေပါတယ်တဲ့။
ပြတိုက်ထဲမှာတော့ လူကျလာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး ၁၀ မိနစ်တစ်ခါလောက် ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်က ပုလဲ ထုတ်လုပ်နည်းအဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းပြပါတယ်။
ထုတ်လုပ်ချင်တဲ့ပုလဲအရောင်ပေါ်မူတည်ပြီး ကမာခွံကိုရွေးသလို ပုလဲအမဲရောင်ထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကမာ အတွင်းသားအမဲတစ်ဝက်လောက်ရှိတဲ့ကမာကို ရွေးပါတယ်တဲ့။ ပုလဲအနက်ရောင်စီးရီးထဲကနေဆိုရင်တော့ အစိမ်းရောင်ပုလဲထွက်လာရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါတဲ့။ အဖြူရောင်စီးရီးထဲကနေတော့ ပန်းရောင်ပုလဲ ကဈေးအရ ဆုံးပါတဲ့။
ပုလဲဖြစ်စေအောင်လုပ်မယ့် ကမာကောင်ထဲထည့်လိုက်မယ့် အတွင်းသားကိုတော့ အမေရိကား မီစစ်စီပီ ကနေရတဲ့ ကမာခွံကို ဖြတ်တောက် လုံးဝန်းအောင်လုပ်ပြီး ပုလဲအဆံအဖြစ်ထည့်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ဆိုက်ပေါ်မူုတည်ပြီး ထည့်ပါတယ်တဲ့။ စိတ်ထဲမှာ ပုလဲကြီးတာဟာနှစ်ကြာလို့မဟုတ်ဘူး အဆံကြီးကြီးထည့်ရင်ကြီးမှာပဲလို့ပါ သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။
ပုလဲ ရဲ့တန်ဖိုးဟာ နှစ်ရှည်ရှည်ထားလေ ကောင်းလေ ကြီးလာလေ မဟုတ်ပါဘူး ။ အနည်းဆုံးတော့ ၃ နှစ် ကနေ ၅ နှစ်လောက်တော့ထားကြပါတယ်တဲ့။ ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ကမာ(ပုလဲအဆံ) ကမာကောင်အသားရဲ့ဘေးသားးလေးတွေကို ၅ ဆင်တီလောက်စိတ် လှီးပြီး တစ်ခါတည်းတခြားသက်ရှိကမာကောင်ရဲ့အခွံကို ဟပြီး အထဲကို ဇာဂနာလိုမျိုးနဲ့ထည့်ပါတယ်။ ထည့်လိုက်တဲ့ ၅ ဆင်တီလောက်ရှိတဲ့ကမာသားရဲ့ ဆဲလ်တွေနဲ့ ပုလဲအဆံလို့ခေါ်ရမယ့် အရာက ထည့်ပြီးမှ အတူတူမပူးပေါင်းဖူုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ့အကောင်ဟာ မအောင်မြင်ဘူးတဲ့။ အောင်မြင်မယ့် ပုလဲကတော့ တစ်ပတ်လောက်အတွင်းမှာ ပုလဲအဆံကို
ဆဲလ်တွေက အလွှာ ၆၀ လွှာလောက် ဖုံးအုပ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ (ပုလဲဝတ်ရတာ ရင်တော့နင့်စရာနော်)
ပုလဲ၁၀၀ မှာ ၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ကွာလတီပုလဲ. ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက ရောင်းတန်းပုလဲ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်က အသုံးမ၀င်တဲ့ပုလဲနဲ့ ကျန်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းက တော့ အညံတန်းပုလဲလို့ ပုံနဲ့တစ်ကွရှင်းပြထားပါတယ်။
ပုလဲအမျိုးမျိုးထွက်ရာ မြေပုံမှာ တို့နိုင်ငံလည်းပါတယ်ဆိုတာ လာကြည့်တဲ့သူတွေ သိမှာပါလေ
ပုလဲဆိုင်ကို ရောက်ပြီးသကာလမှာတော့ မြန်မာပြည်မှာဝယ်ဝတ်ရတာအတန်ဆုံးပါပဲလို့ ကျေနပ်စွာကောက်ချက်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါလေး ၀ယ်ခဲ့တယ်။ ရေချို ပုလဲ နားဆွဲ နဲ့ လော့ကတ်လေး ပါ. လိုချင်တာ ကတော့တခြားပါ ဒါလေးနဲ့ပဲ ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်စုံလုံးကို ယန်း ၆ထောင်ကျော်လောက်ပါပဲ။ ၀တ်စုံအနက်လေးနဲ့ဆို လှမယ်း)
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မြင်လာတဲ့ဈေးတွေနဲ့ ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ
၀ယ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးတွေနဲ့ပြန်ယှဉ်ကြည့်မိတယ်။နောက် ကျေနပ်တယ်။တို့လူမျိုးတွေ ရတနာပို
အောက်ပုံလေးကတော့ နှစ်သက်မိသောအရာထဲကတစ်ခုပါ။ညီမလေး ဆွဲပေးတဲ့ဒီဇိုင်းကို လုပ်ထားတာပါ ။ ကြိုက်လွန်းလို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပွဲလေးတွေဆိုဝတ်မိပါတယ်။ ဂျပန်မှာတော့ ဒီိလိုကြီးကြီးတွေကို အဖွားကြီးတွေပဲ ၀တ်ကြပါတယ်။
ကဲခရီးစဉ်တွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခုတင်ဆက်ဖို့ အစီစဉ်ရှိပါကြောင်း
Posted by ကြည်ကြည် at 9:34 AM 14 comments:
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံးရေကန်ကြီး ရှိတဲ့ ကျွန်မနေတဲ့ပြည်နယ် ဟာ အဓိက ထွက်ကုန်ကတော့ စပါးပေါ့။ ရေကန်ကြီးဘယ်လောက်ကြီးသလဲဆိုရင်တော့ စင်္ကပူနိုင်ငံထက်ကြီးဆိုပဲ။ ရေကန်ကြီးကြောင့် ဒီပြည်နယ်ဟာ တိုးတက်သင့်သလောက်မတိုးတတ်ဘူးလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ ရေကန်ရဲ့ ဘေးမှာ ရှိနေတဲ့တောင်တန်းတွေကနေ စီးဆင်းလာတဲ့ မြစ်၊ ချောင်းတွေက နေ ကန်ရေကို ပြည့်နေစေပါတယ်။ ဒီရေကန်ကြီးကနေ အိုဆာကာ ပြည်နယ် နဲ့ ကျိုတို မြို့ ပတ်ဝန်းကျင်မြို့ပေါင်းများစွာကို ရေပေးဝေနေပါတယ်။ ကျွန်မတို့နေတဲ့မြို့လေးကတော့ ပြည်နယ်ရဲ့ မြို့တော်လို့ခေါ်ရတဲ့မြို့လေးကဆက်နေပါတယ်။ ရန်ကုန်လိုပြောရရင်တော့ ရန်ကင်းနဲ့တာမွေဆက်နေသလိုပေါ့လေ။
ရေကန်ကြီးနဲ့ နီးစပ်လွန်းသလို မြို့တော်ရဲ့ Landscaping တို့ ပန်းခြံတို့ကြောင့် ရေကန်ကမ်းနားလမ်းဘေး လျှောက်ရရင်ကို နိုင်ငံခြားရုပ်ရှုင်တွေထဲကလို သိပ်ကို လှပပါတယ်။ အေးချမ်းပြီး သန့်ရှင်းတဲ့အတွက်
လူဦးရေ ထူထပ်လာပါတယ် ဒီတော့ ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်းကြီးလာပါတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ကျွန်မတို့မြို့လေးကတော့ မဆိုးပါဘူး။
ရေကန်ကြီးကို Lake Biwa လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံကိုတောင်နဲ့ မြောက်ခွဲလိုက်လို့ ကျွန်မတို့က တောင်ဘက်လို့သတ်မှတ်ရင် တောင်ဘက်မှာ အကြီးဆုံးသော ပြည်နယ်သူပြည်နယ်သားတွေ ဂုဏ်ယူရတဲ့ BIWAKO Hanabi မီးရှုးမီးပန်းပွဲကတော့ နာမည်ကြီးပါပဲ။ ၄ ပြည်နယ်လောက်ကနေ ရထားစီးပြီးလာကြည့်ကြသူတွေကအပြည့် နှစ်စဉ်လူ ၁ သိန်းကနေ ၁ သိန်းခွဲ နီးပါးလာကြည့်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
နှစ်စဉ် ၈ လပိုင်း ဒုတိယပတ်လောက်မှ ကျင်းပကြပါတယ်။ မီးရှုးမီးပန်းကတော့ တစ်ရက်ပဲ လုပ်ပေမယ့် ဘေးပတ်လည် မြို့နယ်လေးတွေကလည်း ကျင်းပကြတော့ ဒီပွဲကြီး နေ့မတိုင်မီမှာလည်း ကြိုကြားကြိုကြား အိမ်ပေါ်ကနေ ကြားနေမြင်နေရပါတယ်။ ကမ်းပတ်ပတ်လည်ကို မီးပန်းပွဲကျင်းပမည့် မနက်ကြတော့မှ နေရာဦးခွင့်ပေးပါတယ်။ မနက် ၅ နာရီ ၆ နာရီလောက်ဆို နေရာလာဦးကြတဲ့သူတွေ အစီအရီပေါ့။ ညနေ ၇ နာရီခွဲကနေ ၈ နာရီခွဲ ထိ တစ်နာရီတိတိ ကို မရပ်မနားဖောက်ကြတာကိုး။
Video File လေးကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်သွားပါအုန်း။
မရရင်လည်း YouTube သာသွားကြည့်တော့
သြဂုတ်လဟာ ဂျပန်နိုင်ငံအတွက် က အနုမြူဗုံးကျဲချခံရတဲ့ လ လည်းဖြစ်သလို . ကွယ်လွန်သူများ ရဲ့
၀ိညဉ်တွေ မိမိ မိသားစုတွေဆီပြန်လာလည်တဲ့ပွဲ OBON (အိုဘုန်း)လို့ခေါ်တဲ့ ရက်ရှည်အားလပ်ရက်ရှိတဲ့လလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုပဲ နွေရာသီပွဲ တွေ တစ်နိင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ ကျင်းပကြတဲ့ အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်နေရာသွားသွား Yugata လေးတွေနဲ့ ဂျပန်အမျိုးသမီး အမျိုးသားများကိုတွေ့ရတဲ့အခါ ဂျပန်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု့ကျန်နေသေးပါလားလို့ သိရဲ့တဲ့ အချိန်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေကန်ကြီးထဲမှာ ငါးအပျော်များတဲ့သူတွေကို မျှားထားတဲ့ငါးတွေကို မလိုချင်ရင် ပစ်ထားခဲ့လို့ရအောင် အမှိုက်ပုံးတွေ ထားပေးထားသလို ကန်ထဲက ငါးဟာ (နာမည်တွေရေးထားတယ် မြန်မာလို မရေးတတ်ဖူုး) စားလို့ကောင်းပါတယ်။ ပြန်ယူသွားကြပြီး ချက်စားကြပါလို့ တိုက်တွန်းထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်။
ကန်ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ အော်ရီဂျင်နယ်မျိုးစိတ်တွေကို စားပစ်မယ့် ငါး အမျိုးစားတွေရှိလာတော့ နောက်ပိုင်းမှာ တစ်ချို့သော ငါးတွေလာလွှတ်ရင် အရေးယူမယ်လို့ ငါးနာမည်နဲ့ ဖော်ပြထားတယ်။ (အပေါ်ဆုံးက ပုံ)
အရင်ပို့စ်တွေ ရှည်ထားလို့ ဒီပို့စ်လေးကိုတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတိုတိုလေးပဲ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ မီးပန်းပွဲကိုပြချင်တာပါ။
Posted by ကြည်ကြည် at 10:18 AM7comments: